Isicwangciso sokutshintsha kweApple ukuphucula iApple Maps | Ndisuka mac
Ngokukwanjalo kwiiyure ezimbalwa siza kuzazi iindaba zokuba iApple ilungiselele isoftware yayo kwiinyanga ezizayo. Ngokukodwa ndivela eMac siza kwenza ukulandelelana okupheleleyo ngokubhekisele kwi-Mac OS 10.13 entsha okanye igama abalilungiselele abafana baseCupertino kwinkqubo yabo entsha yokusebenza. Nangona kunjalo, iApple ikwasebenza rhoqo neenkonzo eziphumelelayo kunye neziphucula inkqubo yethu yokusebenza. Enye yezi nkonzo yi-Apple Maps kwaye inkampani ithathela ingqalelo ukutshintsha isicwangciso sayo sokuphucula esiqhubekayo.
Ngokwengxelo ngu iGeneration, I-Apple iceba ukuba namaqabane angaphandle, ngubani Emva kokubhaliswa kule nkqubo, bahlawulwa imali encinci ngalo lonke ixesha belungisa okanye beqinisekisa inqaku elithile kwimephu ye-Apple. Aba basebenzisana baya kufumana isixa semali kulwazi ngalunye abaluxelayo ku-Apple, oluya kuba malunga neesenti ezingama-54, nolungiso olungama-600 ngeveki. Olu tshintsho kwisicwangciso, esele sisetyenziswa zezinye izicelo, lwenza ukuba kugubungele utshintsho naphina emhlabeni.
Ngokuqinisekileyo Iqabane le-Apple liya kufumana indawo ethile kunye neendawo zokujonga. Kule graphic ilandelayo sinokubona umfanekiso we-interface yomdibaniselwano.
Iimephu zika-Apple ziye zagxekwa ngokubanzi ukusukela oko zaziswa ngo-2012. Iimephu zaziqulathe inani elikhulu leempazamo, zombini kwiindawo nakwindlela yokuhamba. Izigqibo ezifikelelweyo kukuba yayingeyomveliso efanele i-Apple. Nje ukuba iimpazamo ziqinisekisiwe, uTim Cook waxolisa kuluntu lwaseApple, kwaye wayengenandlela yimbi ngaphandle kokumgxotha umntu onoxanduva, UScott Forstall.
Ukusukela ngoko uguquko lwayo beluphezulu kodwa aluqhelekanga. E-United States, iimephu ziphuculwe ngakumbi kunabanye. Kwenzeka into efanayo nakumbindi nakumantla eYurophu. Kuyinyani ukuba isabelo sentengiso sika-Apple kumazwe athile siphezulu kakhulu, kwaye ke ngoko ukukhula kwayo kufanelekile. Kwelinye icala, kwelinye icala, kwelona qabane lakhe likhulu liqhubeka nokuba nethuba.
Esi sicwangciso seApple siza kuphehlelelwa kwangoko, ngethemba lokufumana iziphumo kungekudala. Ngolwazi lwedatha olunokufikelelwa yi-Apple, nangokudlula kuGoogle, kuba kwiindawo ezithile inqanaba leenkcukacha zeemephu ze-Apple zingcono kunezo zifunyenwe nguGoogle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Isicwangciso sokutshintsha kweApple ukuphucula iApple Maps